Iipropati zeJelly royal, isicelo
I-Royal Jelly yinto ekhethekileyo eyenziwa yizinyosi ezininzi kakhulu. Inokunyusa ulutsha kwaye ihlangabezane nezifo ezininzi. Ezi zakhiwo ze-jelly zaseburhulumenteni, zisetyenziswa kwiyeza-ziyaziwa ixesha elide, kwaye, ngenxa yokuveliswa kwemveliso yezinyosi zeli zinto, kubiza i-jelly yasebukhosini kubiza kakhulu. Wayebizwa ngokuba yi "jelly royal".
I-jelly yaseRoyal iyimveliso yokukhutshwa kweentlobo ze-maxillary kunye ne-pharyngeal zezinyosi zabasebenzi. Le mfihlelo yabelwe iintsuku ezintandathu ukuya kwi sixhenxe, emva kweentsuku ezimbini ukuya kwethathu ukususela ngosuku umntyiki osebenza ngayo. Injongo ephambili ye-jelly yasebukhosini yondla izibungu. Ngaphezu koko, nankuhluko oqinileyo: izibungu zeedrones kunye neenyosi zabasebenzi zondla ngazo ngexesha leentsuku zokuqala ezintathu zokuphila, ngelixa izibungu zeenyosikazi zisebenzise bonke ubomi babo.
Ebonakalayo, ubisi bumhlophe okanye buphuzi, bunomdla obomlilo kunye nobuthaka obuthathaka obusika, kwaye ngokufanayo kufana nekhilimu enomuncu.
Iibisi ze-bee zizinzile kakhulu kwiimpembelelo zangaphandle-umoya, ukukhanya, ukushisa-kwaye emva kweeyure ezimbini, izinto eziphambili zezinto eziphilayo ziqala ukutshatyalaliswa. Ngoko ke, isiphumo esiphezulu sinalo kuphela xa sithathwa ngokutsha. Le propati yobisi ngokukhawuleza ilahlekelwe ngumsebenzi kwaye ibangela iingxaki ezininzi ngokufumana, ukugcina nokuhambisa imveliso.
Ukwenziwa kweekhemikhali zobisi kuyahlukahluka kakhulu. Oku kuncike kwiimeko ezahlukeneyo: ukususela kwiminyaka yezibungu - kumncinci umxholo weeprotheni kunye namafutha aphezulu kunabo badala; ukusuka kumabhodlela ngokwabo-isisu, i-drone okanye inyosi esebenzayo, ukusuka kwiimeko zokugcina, ukusuka kumandla weentsapho zeenyosi.
Ngokwexabiso eliqhelekileyo, ukubunjwa kubonakala ngathi. Iiprotheni umxholo 9 - 19%, i-lipids 2-9%, i-glucose, i-sucrose, i-fructose-8-19%, i-macro kunye ne-microelements-malunga ne-1%. Kukho namaqela amavithamini - amanzi anelulululweyo C, B, i-soluble ye-fat, i-E, D; i-acid ne-unsaturated fatty acids; i-hormones yesini - testosterone (inkunzi) kunye ne-estrogen kunye neprogesterone (ibhinqa). Ubukho be-antibiotic - igramicidin, i-neurotransmitters, i-acetylcholine yaphawulwa.
Ukuphilisa izakhiwo zobisi.
Impembelelo ye-jelly yaseburhulumenteni iboniswe ngokukodwa ekukhuthazweni kwamalungu athile kunye neenkqubo:
ukuqaliswa kwezinto eziqhelekileyo;
ukuphucula imemori, ukucutha kunye nokwenza umonakalo kwi-system ye-nervous;
ukuphuculwa kwe-metabolism kunye nokuvuselelwa kweengcina ze-endocrine (umveliso we-insulin);
ukususwa kweetyhefu kunye neesxinali ezisuka emzimbeni;
ukuvuselelwa kwemveliso yamaseli omzimba omzimba kunye nobomvu, ukuphucula inkqubo ye-hematopoiesis:
ukuqheleka kwenkqubo ye-cardiovascular system, ukuthintela i-atherosclerosis, ukusebenza kwe-spasmolytic kwimithambo yegazi;
Ukubuyiselwa kwe-microflora eqhelekileyo yenkqubo yokutya, ukupheliswa kwe-dysbacteriosis, i-analgesic kunye ne-spasmolytic effect kwimisipha ehamba kakuhle yephepha lesisu;
ukukhuthaza ukukhula kweethambo, ukuphulukiswa kwelinxeba ngokukhawuleza, nakwi-cornea yamehlo;
ukuvuselelwa kweectation ngexesha lokuncelisa;
ubukho be-antibacterial, antitumor kunye nefuthe le-antiviral.
Faka isicelo se-jelly yaseburhulumenteni:
xa uhlaselwa kwizifo ezinzima, izifo ezahlukeneyo zokutya kunye nezifo zesistim sokutya;
ngexesha lokubuyiselwa emva kokunikezelwa ukubuyisela igazi nokuvuselela i-lactation;
ukungabi namandla, i-neuroses, ukuphuma kwesikhashana;
xa umsebenzi weentlanzi ezithengayo zentloko ziphazamiseka
I-jelly yaseburhulumenteni yangaphandle inconywa ukuba isetyenziswe kwizilonda ezingaphilisi kunye nezifo, izifo zesikhumba.
I-jelly yaseRoyal isetyenziswe kwiimveliso zonyango kwaye isele ifumaneka ngendlela yamayeza aphelileyo kunye namayeza ahlukeneyo kunyango lwezifo ezahlukahlukeneyo. Ngokomzekelo, isilwanyana esibizwa ngokuthi "Apillac" senziwa kwi-jelly yasekhaya esomileyo ngeendlela ezahlukeneyo: ngendlela yamacwecwe, i-3% e-ointment, i-rectal suppositories.
Ngaphambi kokusebenzisa iziyobisi unyango okanye ukhuselo kufuneka uxubane nodokotela wakho, njengoko kukho ukungqinisiswa kokusetyenziswa: isifo se-Adisson kunye nokungahambisani nokusetyenziswa kwezi ziyobisi.
Ndingazibona njani iingxaki ngentliziyo yam ngexesha?
I-Herpes: izilwanyana zamalungu
Unyango lokutshiswa kunye nezilwanyana zomntu
Lungiselela ukukhulelwa emva kokuphuma kwesisu
Yintoni umfazi otshatileyo kufuneka ayenze
Indlela yokucoca itekisi ekhaya?
Unyango lwe-gastritis engapheliyo kunye nezilwanyana zamalungu
I-Arabic style, uyilo
Ubugcisa be-Pop - isitayela sangaphakathi
Ioli yeArgan yeenwele
Indlela yokubona uthando ngamehlo nangendlela yokuziphatha
Abaphandi baseMerika bafika kwisigqibo sokuba abantwana abazalelwe ngaphambi kwesikhathi, ngokuphindaphindiweyo, bahlala bengenamntwana
Ukubiza udokotela wezingane ekhaya
I-anyi mask ebusweni
Indlela yokwenza umtya we-denim kwi-jacket?